अष्ट्रेलिया आ’गलागी : थप क्ष’ति नहोस् भन्ने विश्व समुदायकाे कामनामा – Khabarhouse
अष्ट्रेलिया आ’गलागी : थप क्ष’ति नहोस् भन्ने विश्व समुदायकाे कामनामा
Khabar house | २२ पुष २०७६, मंगलवार १५:४६ | Comments
काठमाडौं,२२ पुष । आ’गला’गीका कारण अष्ट्रेलियामा हजारौं जीवजन्तु म’रेको न्यूज र तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भा’इरल छ । अत्यन्तै का’रुणिक ति तस्वीर हेरेर विश्व समुदाय नै त्यहाँ थप क्ष’ति नहोस् भन्ने कामनामा छ। आ’गला’गी का कारण अष्ट्रेलियामा अत्यधिक ग’र्मी बढेको छ । भगिरथ प्रयास गर्दा पनि आगो निभाउन सकिएको छैन । किन त ?
तीन महिनायता अष्ट्रेलियामा द’न्किरहेको आ’गो निभाउने प्रयास असफल हुँदा क्ष’ति बढिरहेको छ । अत्यधिक ग’र्मीका कारण नोभेम्बर- डिसेम्बरमा यहाँ धेरै आ’गला’गीका घ’टना हुन्छन् । तर, अहिलेको आ’गलागी अधिक भ’यंकर र क्ष’तिका दृष्टिले अ’पूर णीय भयो । अष्ट्रेलियाको इतिहासकै सबैभन्दा खतरनाक आगलागीमा हालसम्म १५ जनाले ज्या’न गु’माएका छन् भने सयौं घर र लाखौं एकड जमिनका बिरूवा र पशुपंक्षी ख’रानी बनेका छन् ।
वैज्ञानिकले जलवायु परिवर्तनको अ’सर बढ्दा अष्ट्रेलिया सबैभन्दा धेरै चपेटामा पर्छ भन्दै आएका थिए । र, भयो पनि त्यस्तै । उसै त गर्मी याममा अधिक तातो र सुख्खा हुने अष्ट्रेलिया जलवायु परिवर्तनको असरले थप तातो भयो । र, वनस्पति सुख्खा–सुख्खा भए ।सुख्खा बोट–विरूवामा आगो सल्किन सहज भयो । जंगल नजिकका ट्रान्समिटरबाट निक्लिएको झि’ल्काले पनि आ’गोको फैलावट बढायो ।
अष्ट्रेलिया ६ मध्ये ४ प्रान्तमा आगो फैलिदा सबैभन्दा बढी प्रभाव पूर्वी तटीय क्षेत्रमा परेको छ । दशौं हजार अग्नि नि’यन्त्रक निभाउन खटिएका छन। तर,अहिले सम्मकै बढी तापक्रम, लामो खडेरी र श’क्तिशा’ली हुरीबतास आ’गो निभाउने प्रयासमा बा’धक बनि रहेको छ । दुर्लभ बन्यजन्तु ख’रानी भएका दृश्य र तस्वीरले विश्वको ध्यान खिचेको छ । युनिभर्सिटी अफ सिड्नीका जैविक विविधता ज्ञाताका अनुसार आगोका कारण करिब ५० करोड हा’राहारीमा पशुपंक्षी म’रेका छन् ।
आ’गोबाट बच्न भाग्दै गर्दा तारमा अल्झि’एका जनावरका डढेको श’रीर, आ’गोमै ज’लेर बाँ’च्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गाईलाई गो’ली हानेर मा’र्दै गरिएको दृश्य र मानिसले आश्रय दिएपछि घरमै बसिरहेका जंगली कंगारुका तस्विरले अष्ट्रेलियाको संकट दर्शाउँ छ । केही दिनयता मध्यम वर्षा भएपनि त्यो द’न्किएको आ’गो निभाउन पर्याप्त छैन । वर्षा रोकिएसँगै स्वतः बढ्ने ग’र्मीले आ’गोको फैलावट अझै बढाउने अनुमान छ ।
जापानले बनायो उड्ने बाइक, मुल्य कति पर्ला ?
यसकारण पर्यटकको रोजाइमा पर्छ डोल्पा
तीनवटा सवारी ठोक्किए : एकको नि’धन, ६ जना गम्भीर घा’ईते
बाटोमा खाल्डा देखेपछि आक्रोशित सिडिओले भने- प’क्राउ पुर्जी जारी गर्छु
फलामे डन्डीको भाउ बढ्यो, सरकारको दाबी गलत साबित !
फिल्म सेटबाट अनुपमले गरे नेपाली पाइलटको प्रशंसा